विश्वकप फुटबलका तपाईलाई थाहा नभएका केहि रोचक तथ्य - A2Z Nepal
Bednath 10:57 PM
विश्वकप हरेक ४ बर्षमा फिफाद्वारा आयोजना गरिन्छ । एक महिनाको अवधिमा ३२ राष्ट्रका राष्ट्रिय टीमहरु विश्वकप जित्नको लागि ६४ म्याचमा प्रतिस्पर्धा गर्दछन् । संसारको प्रख्यात खेल मध्येको एक विश्वकपले खेलाडी र फ्यान दुबैलाई तनाब र उत्साह सिर्जना गर्दछ । यस प्रतिष्ठित खेलमा विश्वकप सम्बन्धि धेरै रेकर्ड बनेका छन् ।
तपाई फुटबल प्रशंसक हुनुहुन्छ तर तपाइलाई विश्वकप सम्बन्धि अचम्म लाग्दो र अविश्वसनीय चार तथ्यहरु थाहा नहुन सक्छ । हेर्नुहोस बिस्व कप सम्बन्धि रोचक तथ्य !
संसारका करिव आधा जनसंख्याले विश्वकप हेर्छन्
संसार भरिका करिब ४६ % मान्छेहरु विश्वकप २०१० मा लगभग १ मिनेट भन्दा बढी देखिएका थिए । फिफाका अनुसार फुटबल खेल विश्वको सबै भन्दा व्यापक रुपमा हेरिने खेल हो ।
यो आश्चर्यजनक छ कि विश्वका ४६% मानिसहरु विश्वकप हेर्न एकजुट हुन्छन् तर २ अर्ब अथवा २.९ % मानिसहरुले मात्र ३० मिनेट भन्दा बढी समयसम्म विश्वकप हेर्ने गर्छन् ।
विश्वकप विजेतालाई ३५मिलियन डलर
सबै भन्दा रोचक कुरा फिफाले टुर्नामेन्टमा सहभागीहरुलाई कसरी पैसा दिन्छ भन्ने हो । विश्वकप बाहेक विजेताले ३५ मिलियन डलर पाउँछन् । फिफाले रनर अपलाई समेत निराश नगर्नका लागि २५ मिलियन डलर पुरस्कार दिन्छन् ।
टुर्नामेन्टमा शिर्ष स्थान हासिल गर्ने टीमहरुले छुट्टा–छुट्टै प्रकारको धनराशी पाउँछन् । सबैभन्दा रोचक कुरा त विश्वकपमा भाग लिने प्रत्येक टिमले लाखौं डलरको चेक पाउँछन् । वास्तवमा भन्नु पर्दा समूह चरणको खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सबै टिमलाई फिफाले ८ बिलियन डलर छुट्याउँछ ।
विश्वकप खेल्दा सेक्सको अनुमती हुँदैन
जर्मनी, स्पेन, मेक्सिको र चिलीका कोचहरुले सबै खेलाडीहरुलाई टुर्नामेन्ट भरी यौन सम्बन्ध राख्न निषेध गरेका छन् । फुटबलका म्यानेजरका अनुसार सेक्स खेलाडीलाई भड्काउने र इनर्जी बर्बाद बनाउने काम हो । ब्राजीलका लुइज फेलिप स्कोलरी जस्ता अन्य प्रबन्धकहरुले एक थप मिश्रित दृष्टिकोण लिसकेका छन् । खेलाडीहरु सेक्स गर्न सक्छन् तर अधिक “एक्रोबेटिक” रुपबाट पर रहेर ।
सबैभन्दा छिटो गोल र छिटो रेड कार्ड रेकर्ड
विश्वकप २००२ मा दक्षिण कोरिया विरुद्धको खेलमा टर्कीका ह्याकन सुकुरले ११ सेकेण्डमा गोल गरेका थिए । सो खेलमा टर्कीले दक्षिण कोरियालाई पराजित गर्याे । सुकुरले ११ सेकेण्डमा गोल गरेर विश्वकपमा सबैभन्दा भन्दा छिटो गोलको रेकर्ड राखेका छन् । उरुग्वे डिफेंडर जोस बटस्ताको विश्वकप इतिहासको सबै भन्दा छिटो रेड कार्डको रेकर्ड रहेको छ । उनले मिडफिल्डर गिर्डन स्ट्राचनको खुट्टामा फल गरेपछि ५६ सेकेण्डमा रेडकार्ड खाई म्याचबाट बाहिर आएका थिए ।
The distance between the easternmost host city (Ekaterinburg) and the westernmost host city (Kaliningrad) at the 2018 World Cup is over 1500 miles. For comparison, that’s about the same distance as Moscow to London, England.